चूडामणि शर्मा सम्पर्कविहीन, जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी - pnpkhabar.com
YOU’RE THIS IS MY BLUE MIST, YOU’RE OUR SUNNY MOMENT!
You are at:Home»समाचार»चूडामणि शर्मा सम्पर्कविहीन, जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी
चूडामणि शर्मा सम्पर्कविहीन, जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी
By सन्दीप खत्री on १२ माघ २०७४, शुक्रबार ०८:१३ समाचार
काठमाडौं, १२ माघ: अकूत सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सम्पर्कविहीन भएका छन् । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा शर्मा सम्पर्कमा नरहेकाका हुन् । शर्माले तीन पटक अख्तियारमा बयान दिएका थिए । उनी ‘फरार’ भएको बुझिएको छ ।
अख्तियारले शर्माका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । उनी फेला परेका छैनन् । ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अब उहाँलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँबाट समाउँछ ।’ अख्तियारले शर्मामाथिको अनुसन्धानको फाइल आयुक्तहरूलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । अब आयुक्तहरूको निर्णयपछि शर्मामाथि अर्को मुद्दा विशेष अदालतमा दायर हुनेछ ।
कर फछ्र्यौट आयोगको मुद्दामा विशेष अदालतबाट एक करोड धरौटीमा छुटेका शर्मालाई अख्तियारले अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धानमा तानेको थियो । बयानकै क्रममा उनले आफू बिरामी परेकाले बयानका लागि आउन नसक्ने निवेदन अख्तियारमा पेश गरेका थिए । अख्तियारले पटक–पटक बयानमा बोलाउँदा पनि शर्मा अख्तियार नगएको स्रोतले बतायो ।
कर फछ्र्यौट आयोगको अनियमिततामाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला शर्मालाई अख्तियारले १३ पन्ने सम्पत्ति विवरण फारम भराएको थियो । त्यसपछि उनीमाथि अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धान पनि अघि बढाइएको छ । सो विवरणमा शर्माले २३ करोडको सम्पत्ति आफूसँग भएको बताएका थिए ।
शर्मा कर फछ्र्यौट आयोगमार्फत कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दामा मुछिए । यही अनुसन्धानमा शर्मालाई अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा पनि तानेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कर फछ्र्यौट आयोग गठन गरेका थिए । शर्मामाथि एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा राज्यलाई आउनुपर्ने लाभकर छुट दिन भूमिका खेलेको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ ।
अख्तियारले कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाइ पनि विपक्षी बनाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १६ र नियमावली २०५९ को दफा १५ बमोजिम शर्मालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारी भएको छ ।
२ श्रावण २०७६, बिहीबार ०२:१७ 0
२ श्रावण २०७६, बिहीबार ०२:०३ 0
१ श्रावण २०७६, बुधबार ०७:५४ 0
२४ चैत्र २०७४, शनिबार ०४:३५ 0
टुटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पुरातात्विक महत्वका मूर्ति फेला